रद्द भएको विज्ञापनमा बढुवा सिफारिस: भूपेन्द्र भन्छन्- 'बीचमा के खेल भयो मलाई थाहा छैन' Ukeraa – Latest and featured news from Nepal.
काठमाडौंः कोभिड- १९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल (वीर अस्पताल)का निमित्त कार्यकारी अधिकारी डा. भूपेन्द्र बस्नेत लोकसेवा आयोगले रद्द गरेको विज्ञापनमा बढुवा सिफारिस भए। तर यो विषय आफ्नो जानकारीमा नभएको उनी बताउँछन्।
‘रद्द भएको भए प्रक्रियामा किन गयो त ? मलाई थाहै छैन। अहिले तपाईंले भनेर थाहा पाइरहेको छु', उनले भने।
सोमबार उकेरासँग कुरा गर्दै उनले विज्ञापन रद्द भएको बारे थाहा नभएको बताएका हुन्।
'आयोगले किन विज्ञापन रद्द गरेछ त ?’ उनले प्रश्न गरे, 'कि त त्यो क्यान्सिल भयो भने मलाई जानकारी हुनुपर्यो?। तेरो यो फर्म रद्द भयो भनेर मलाई भनिदिनुपर्योि। मलाई जानकारी पनि आएको छैन। मैले नोटिस पनि हेरेको छैन। कसरी हुन्छ?’
आयोगले बढुवाको लागि असोज २७ गते प्रकाशित गरेको सो विज्ञापन कात्तिक २७ गते सूचना जारी गर्दै रद्द भएको जनाएको थियो।
तर पुस २३ गते भने बढुवा भएको सूचना प्रकाशित भएको थियो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बढुवा समितिको सचिवालयले भूपेन्द्रलाई कार्यक्षमताको मूल्यांकन प्रक्रियाद्वारा हुने बढुवाका लागि ११औं तहमा सिफारिस गरेको हो।
मन्त्रालयको बढुवा समितिको सचिवालयले २०७८-०९-२३ मा सूचना जारी गर्दै डा. बस्नेत ६२-०७८-७९ बढुवा सूचना नम्बरअनुसार बढुवा भएको जनाएको थियो।
तर, बढुवाको सो सूचना नम्बर आयोगले कात्तिक १७ गते जारी गर्दै २०७८-७-१५को निर्णयअनुसार रद्द गरिसकेको थियो।
यता डा. बस्नेतले भने रद्द सूचनाको आधारमा बढुवा सिफारिस भएको बारे अनभिज्ञता जनाए।
'कसरी रद्द भयो त? मलाई त थाहा छै न त। मैले त हेरेको छैन', उनले भने।
उनले थपे, 'मलाई त फर्म भरेपछि यो भएको (बढुवा भएको) मात्र थाहा छ। बीचमा के खेल भयो मलाई के थाहा? यो खोज्ने विषय भयो। म त खोजिहाल्छु नि।'
बस्नेत आफूले विज्ञापन खुलेको समयमै प्रक्रिया पुर्यालएर फर्म भरेको र हाल नतिजा प्रकाशन भएर बढुवा सिफारिस भएको सूचना मात्रै देखेको बताउँछन्। उनी अरू विषयमा थाहा नभएको दावी गर्छन्।
आयोगमा कात्तिक ३-४ गतेतिर बढुवाका लागि दरखास्त फर्म बुझाएको उनले जानकारी दिए। फर्म बुझाएपछि जानकारी नै नआएको उनको दावी छ।
‘फर्म बुझाएकै हो। स्वीकार भएकै हो’, डा. बस्नेतले भने, ‘मैले फर्म लगेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाउने हैन। बुझाएको त लोकसेवा आयोगमा हो।'
यता आयोगले समेत रद्द भएको विज्ञापनमा बढुवा हुन नपाइने बताइसकेको छ।
डा. बस्नेत बढुवा भएको समूह/उपसमूह मेडिसिन/ ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजी हो भने पद प्रमुख कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिष्ट हो।
वीर अस्पतालका प्रमुख डा. भुपेन्द्र रद्द भएको विज्ञापनमा बढुवा भएको खुलासा